Wasiirka howlaha guud oo la kulmay injineerradii hore ee wasaaraddaasi – Radio Muqdisho
Wasiirka howlaha guud oo la kulmay injineerradii hore ee wasaaraddaasi
Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah Injineerradii hore ee wasaaradda.
Kulanka wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka Ing. Saalaax Sheekh Cusmaan uu la qaatay Injineerradii hore ee ka soo shaqeeyay wasaaradda ayaa looga hadlay sidii ay Injineeradani wasaaradda uga caawin lahaayeen qibradooda ku aadan dib u dhiska iyo soo nooleynta sharciga dib u dhiska dalka.
Wasiirka ayaa Injineerrada ka dhaqeystay talooyin ku aaddan qaabka dib loogu soo nooleynkaro howliihii wasaaradda, iyagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dib u howlgelinta wakaaladdii hindisaha Soomaaliyeed ee hoos tagi jirtay wasaaradda.
Injineer Ibraahim Muuse Abuukar oo ku hadlay magaca Injineerrada wasaaradda ayaa sheegay iney ka go’antahay injineerrada iney kaalin wax ku ool ah ka qaataan horumarinta howlaha wasaaradda, isagoo intaa ku daray iney diyaar u yihiin ineey qibradooda uga faa’iideeyaan ummadda Soomaaliyeed.
Kulanka uu wasiirku la qaatay Injineeradii hore ee wasaaradda ayaa looga dhawaaqay guddi ka shaqeeya diyaarinta shuruucda dhismaha dalka
Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dalka Injineer Saalax Sheekh Cusmaan oo ka hadlay howlaha guddiga ayaa yiri ”Shaqadoodu waxey tahay soo nooleeynta wakaaladihii sida wakaalada dhiskamaha wakaalada hindisaha, wakaalada jidadka wakaaladda hindisaha ayna dabbaqaan wixi loo xilsooray muddo dhowna ay soo diyaariyaan.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka hadlay qorshaha horyaalla “SAWIRRO”